भारतले पत्ता लगायो को’रोना परीक्षणबारे नयाँ विधि, नतिजा ३ घण्टामै ! – Khabarhouse
Khabar house | १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:२५ | Comments
एजेन्सी : भारतको नागपुरस्थित नेशनल इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ रिसर्च इन्स्टिच्युट (एनईईआरआई) ले को’रो ना परीक्षणको सहज तरिका पत्ता लगाएको छ । जस अनुसार ३ घण्टामै को’रो नाको नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ । यस प्रक्रि यालाई सलाईन गार्गल आरटी–पिसिआर नाम दिइएको छ । यसको अर्थ नुनपानीबाट कुला गर्दै को’रो नाको जाँच गर्न सकिन्छ ।
यस प्रविधिलाई इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ले शनिबार स्वीकृति दिएको छ । एनईईआर आईका अनुसार भारतमा परीक्षण बढाउनका लागि यो प्रक्रिया सहयोगी हुनेछ । यो प्रक्रिया निकै सरल, तिव्र र आरामदायी रहेको तथा ग्रामिण इलाकामा सहयोगी साबित हुने जनाइएको छ । एनईईआरआईका भिरोलोजी डिपार्टमेन्टका प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर कृष्णा खैरनारका अनुसार यो प्रक्रिया निकै सहज छ ।
आमरुपमा मानिसहरुले आरटी–पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाबको नमूना दिन दुई घण्टासम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि स्वाबको नमूनालाई संकलन गरेर ल्याबसम्म पुर्याउन पनि समय लाग्छ । यसको ठिक उल्टो सलाईन गार्गल आरटी–पिसिआर परीक्षण बाट तुरुन्तै स्याम्पल दिन सकिन्छ र नतिजा पनि ३ घण्टा भित्रै आउँछ । भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री डाक्टर हर्षवर्दनले यो प्रविधि गेम चेन्जर साबित हुनसक्ने बताएका छन् ।
बिरामीले कसरी लिन सक्छन् स्याम्पल
–स्याम्पल लिनका लागि एक सामान्य स्याम्पल कलेक्सन ट्युब जरुरी हुन्छ ।
–बिरामीले नुन पानीबाट १५ सेकेन्ड कुला गरेपछि त्यसलाई ट्युबमा हाल्नुपर्छ ।
–स्यामपललाई कोठाको तापक्रममा एनईईआरआईले तयार गरेको विशेष घोलमा राखिन्छ ।
–घोललाई तातो गरेपछि एक आरएनए टेम्प्लेट तयार हुन्छ ।
– यसलाई आरटी–पिसिआरका लागि प्रोसेस गरिन्छ ।
–अन्य प्रक्रियाको दाँजोमा यो निकै सस्तो छ ।
–वेस्टेज निकै कम निस्कने भएकाले पर्यावरणका लागि पनि फाइदाजनक छ ।
आरटी–पिसिआर के हो ? आरटी–पिसिआरको अर्थ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्शन पोलिमरिज चेन रिएक्सन टे’स्ट हुन्छ । जस अन्तर्गत, बिरा मीभित्र भाइरस पत्ता लगाउनका लागि डिएनए चेन रिएक्सन गराइन्छ । परीक्षण मार्फत भा’इरसको जेनेटिक मेटेरियललाई जाँच गरिन्छ । को’रो ना आरएनए भा’इरस हो । यसमा परीक्षणका लागि उपयोग गरिनेवाला आरएनए बिरामीको स्वाबबाट निकालिएको हुन्छ । स्रोत : दैनिक भाष्कर
नेपालमा वितरित चिनियाँ खोप भेरोसेलबारे जान्नै पर्ने ६ कुरा
सुत्नुअघि यी दुई अंगमा द’ल्नुस् तोरीको तेल, हुन्छ आराम
लौकाको बोक्रा नफाल्नुहोस् यस्ता छन् यसका फाइदा
आँपका यस्ता छन् फाइदै फाइदा !